COVID Kuputika muAfrica: US $ 7.7 Bhiriyoni Nyika haigone kuramba
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Health News » COVID Kuputika muAfrica: US $ 7.7 Bhiriyoni Nyika haigone kuramba
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • South Africa Breaking News • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
WHO: 90% yenzvimbo dzehutano dzepasi dzinoenderera mberi dzichikanganiswa ne COVID-19 denda
Musiyano weDelta unoisa nyika parutsigiro rwepamoyo. Nyika iri panjodzi, asi hapana dunhu rinopfuura Africa. WHO inoda $ 7.7 bhiriyoni ye Africa izvozvi, uye nyika haigone kukanganwa. Sokutaura kwakaita Mutungamiriri weU.S. Biden: “Tese tiri mune izvi pamwe chete. hapana munhu akachengeteka kusvikira munhu wese ave akachengeteka. ”
World Health Organisation yakashuma mu Africa, kufa kwakawedzera ne80% mumavhiki mana apfuura. Zvizhinji zvekuwedzera uku zviri kufambiswa neshanduko-inotakurika yeDelta musiyano, iyo yave kuwanikwa munyika dzinosvika 4.
WHO iri kutsigira nyika nezvipiwa zveoksijeni, nehungwaru kubatsira nyika kuti dzione zvirinani, uye isu tinoramba tichishanda zuva rega rega needu epasirese network evanyanzvi kuti tinzwisise kuti nei musiyano weDelta uchipararira nyore.
Chinangwa cheWHO chinoramba chiripo kutsigira nyika dzese kubaya nhomba 10% yevagari mukupera kwaGunyana, makumi mana muzana pakupera kwegore rino, uye 40% nepakati pegore rinouya. Asingasviki 70% ezvese zviyero zvinopihwa pasi rose zvave mu Africa. Ingori 2% yevagari vekondinendi vakabaiwa zvakakwana.
Nhasi WHO yatora rimwe danho kumberi, iine tsamba yechinangwa iyo inoratidza mitsara yekudyidzana yakasainwa nevadyidzana munzvimbo iyi: WHO; Medicines Patent Pool; Afrigen Biologics; iyo Biologicals uye Vaccines Institute yeSouthern Africa; iyo South Africa Medical Research Council uye Africa Centers for Disease Kudzora nekudzivirira.
Chinangwa cheWHO chinoramba chiripo kutsigira nyika dzese kubaya nhomba 10% yevagari mukupera kwaGunyana, makumi mana muzana pakupera kwegore rino, uye 40% nepakati pegore rinouya. Asingasviki 70% ezvese zviyero zvinopihwa pasi rose zvave mu Africa. Ingori 2% yevagari venyika ino vakabaiwa zvakakwana.
Mukupindura kukwidziridzwa kweDelta, nhasi iko Kuwana kweECOVID-19 Zvishandiso Accelerator iri kuvhura iyo Rapid ACT-Accelerator Delta Response, kana RADAR, ichipa kuridziro yekudaidzira mabhiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe emadhora ekuAmerica kuongororwa, kurapwa, uye majekiseni.
Mukufananidza, isu tichada mari yekuwedzera gore rino kuti COVAX ishandise sarudzo dzayo kutenga majekiseni e2022.
Mutungamiriri-mukuru weWorld Health Organisation anotungamira World Health Organisation uye anogadzwa ne, uye anotarisira World Health Assembly. Iyezvino director-general ndiTedros Adhanom, akagadzwa musi wa1 Chikunguru 2017
Vakataura pamusangano wezuro nevatori venhau maererano neHurumende yeCOVID-19 muAfrica.
Mangwanani akanaka, masikati akanaka, uye manheru akanaka.
Pakutanga vhiki ino, ndakave nerukudzo rwekuenda kuBahrain neKuwait, uko WHO yakavhura mahofisi edu maviri matsva emunyika.
Ini zvakare ndakave nemukana wekushanyira zvivakwa zvinoverengeka zvakagadzirirwa kupindura COVID-19 uye ndakafadzwa kwazvo nehunyanzvi uye hwakazara nzira.
Iye zvino tave nemahofisi emunyika zana nemakumi maviri nemaviri pasi rose. Ivo vari pakati pezvinoitwa neWHO - nyika dzinotsigira kusimbisa masisitimu ehutano nekuvandudza hutano hwevanhu vavo.
Izvi zvisati zvaitika, ndakakudzwa kukokwa kuTokyo kunotaura kuInternational Olympic Committee.
Ndakaenda kunopindura mubvunzo wandinowanzo bvunzwa: iro denda richapera riini?
Mhinduro yangu yaive yekuti denda rinopera kana nyika yasarudza kuumisa. Zviri mumaoko edu.
Tine maturusi ese atinoda: tinokwanisa kudzivirira chirwere ichi, tinogona kuchiongorora, uye tinogona kuchirapa.
Uye zvakadaro kubvira musangano wedu wekupedzisira wevatori venhau, kesi uye kufa kubva kuCOVID-19 zvakaramba zvichikwira.
Anenge mamirioni mana emakesi akashumwa kuWHO svondo rapfuura, uye pane zvazvinoitika, tinotarisira kuti huwandu hwezviitiko hunopfuura mamirioni mazana maviri mukati memavhiki maviri anotevera. Uye isu tinoziva kuti ndiko kurerutsa.
Pakati nepakati, mumatunhu mashanu ematunhu matanhatu eWHO, hutachiona hwakawedzera ne80%, kana zvakapetwa kaviri, mukati memavhiki mana apfuura. Mu Africa, kufa kwakawedzera ne80% panguva imwecheteyo.
Zvizhinji zvekuwedzera uku zviri kufambiswa neshanduko inotapukira yeDelta, iyo yave kuwanikwa munyika dzinosvika 132.
WHO yakayambira kuti hutachiona hwe COVID-19 hwave kuchinja kubva payakatanga kutaurwa, uye iri kuramba ichichinja. Parizvino, zvina zvakasiyana zvekushushikana zvabuda, uye pachave neakareba chero hutachiona huchienderera mberi nekupararira.
Iko kusimuka kunoitiswawo nekuwedzera kwekusanganiswa kwevanhu uye kufamba, kusapindirana kwekushandisa kweveruzhinji hutano uye magariro matanho, uye zvisina kukodzera kushandiswa kwejekiseni.
Kubudirira kwakahwina kuri munjodzi yekurasika, uye masisitimu ehutano munyika zhinji ari kukurirwa.
Kuwedzera kwehutachiona kuri kuumba kushomeka kwemishonga senge inoponesa hupenyu okisijeni.
Nyika makumi maviri nemapfumbamwe dzine yakakwira uye iri kuwedzera okisijeni inoda, uye nyika zhinji hadzina zvinhu zvakakwana zvekushandisa kuchengetedza zvigadzirwa zvemberi zvehutano.
Zvichakadaro, zviyero zvekuyedza munyika dzinotambira mari zviri pasi pe2 muzana yezvavari munyika dzinowana mari yakawanda - zvichisiya nyika iri bofu kuti inzwisise kuti chirwere chiri kupi uye kuti chiri kuchinja sei.
Pasina zvirinani kuyedza zviyero pasirese, hatigone kurwisa chirwere kumberi kana kudzikisira njodzi yetsva, inotyisa misiyano iri kubuda.
Asi isu tinoda zvimwe:
Tinoda kuongororwa kwakasimba;
Tinoda imwe nzira yekuyedza kugadzirisa kunzwisiswa kwepasirese nezvekuti hutachiona huripi, uko kupindira kwehutano hweveruzhinji kunonyanya kudikanwa, uye kupatsanura makesi uye kuderedza kutapurirana;
Tinoda varwere kuti vagamuchire kurapwa kwekutanga nevashandi vehutano vakarovedzwa uye vanochengetedzwa, vane oxygen yakawanda yekurapa vanorwara zvakanyanya uye kuponesa hupenyu;
Tinoda vakadzidziswa zvakanaka uye vanochengetedzwa zvakanaka vashandi vehutano uye masystem ekuendesa masevhisi uye maturusi ekuponesa hupenyu;
Tinoda kumwe kutsvagisa nekusimudzira kuti tione kuti bvunzo, marapirwo, majekiseni, uye zvimwe zvishandiso zvinoramba zvichishanda zvichipesana nemusiyano weDelta uye zvimwe zviri kubuda;
Uye zvechokwadi, tinoda mamwe majekiseni.
Mwedzi wapera, takazivisa kuti tanga tichigadzira nzvimbo yekuchinjisa michina yekudzivirira mRNA muSouth Africa, sechimwe chikamu chedu chekusimudzira kugadzirwa kwemajekiseni.
Nhasi tatora imwe nhanho kumberi, ine tsamba yechinangwa iyo inoratidza mitsara yekudyidzana yakasainwa nevadyidzani muhubhu: WHO; Medicines Patent Pool; Afrigen Biologics; iyo Biologicals uye Vaccines Institute yeSouthern Africa; iyo South Africa Medical Research Council uye Africa Centers for Disease Kudzora nekudzivirira.
Chinangwa cheWHO chinoramba chiripo kutsigira nyika dzese kubaya nhomba 10% yevagari mukupera kwaGunyana, makumi mana muzana pakupera kwegore rino, uye 40% nepakati pegore rinouya.
Isu tiri kure kure kuzadzisa izvo zvinangwa.
Parizvino, inopfuura hafu yenyika dzakabaya zvizere 10% yehuwandu hwevanhu, isingasviki kota yenyika dzakabaya 40%, uye nyika nhatu chete dzakabaisa 3%.
Rinenge rinenge gore rapfuura, WHO yakatanga kuratidza kushushikana nezvekutyisidzirwa kwe 'vachengeti venyika';
Mumusangano nevatori venhau munaNovember, takayambira nezve njodzi yekuti varombo venyika vaizo "tsikwa-tsikwa mukutsikwa nemishonga yekudzivirira";
Uye pamusangano weWHOFO Board Board muna Ndira gore rino, isu takati pasi rose rave padanho rekuti "kukundikana kwetsika".
Uye zvakadaro kugoverwa kwepasirese kwemajekiseni kunoramba kuri kwekusaruramisira.
Matunhu ese ari panjodzi, asi hapana zvakadaro Africa.
Pazvinhu zvazvino, dzinoda kusvika makumi manomwe kubva muzana dzenyika dzemu Africa hadzisvike kuchikamu chegumi chekudzivirira kupera kwaGunyana.
Dzakakomberedza 3.5 mamirioni kusvika kumamirioni mana madhizaini anopihwa vhiki nevhiki mukondinendi, asi kuzadzisa tarisiro yaGunyana izvi zvinofanirwa kukwira kusvika pamamiriyoni makumi maviri nemana emadhosi painenge svondo rega rega.
Nyika zhinji dzemu Africa dzakagadzirira zvakanaka kuburitsa majekiseni, asi majekiseni aya haasati auya.
Asingasviki 2% ezvese zviyero zvinopihwa pasi rose zvave mu Africa. Ingori 1.5% yevagari vekondinendi vakabaiwa zvakakwana.
Iri idambudziko rakakomba kana tichizotora matanho kurwisa denda iri nekuripedza.
Iyi yekudyara chikamu chidiki chemari iri kushandiswa nehurumende kubata neCOVID-19.
Mubvunzo hausi wekuti nyika ingakwanise kuita mari idzi here; ndezvekuti inogona kukwanisa kwete.
Svondo 26, 2021 pa 22: 40
Mustajaba Hassan anoti:
Nyamavhuvhu 3, 2021 pa09: 22
Anodiwa Sir / Madam
Jntour uye Kufamba kunyorera kubvunza pane yako kambani
angave anofarira kuita
bhizinesi newe. Jntour & Travel Ltd ikambani iri muZanzibar, Tanzania
ronga epakeji mapakeji kuti akwanise mutengi wedu
zvinodiwa. Tinoda kuda kushanda newe seanoshanda.
Kana paine chero mibvunzo kana inoda kutaurirana usazeze
email nesu pa [email inodzivirirwa]
kune kumwe kujekeswa. Kana Nomutsa shanyira webhusaiti yedu
Mutungamiriri weJntour Company ltd